Home Wararka Ciyaaraha Arsenal oo ku dhow in heshiis cusub ay ka saxiixato Kieran Tierney.
Kooxda Arsenal ayaa shaacisay in Kieran Tierney uu ku dhow yahay inuu heshiis cusub u saxiiso Gunners kaas oo gaarayo shan sano kaas oo xidiga daafaca ah ee xulka Scotland uu garoonka Emirates Stadium sii joogi doobaa illaa 2026.
Xidiga garabka bidix ayaa wuxuu fure u ahaa Gunners tan iyo markii uu yimid sanadkii 2019, isagoo soo jiitay maamulka sare ee arsenal iyo macalinka kooxda Mikel Arteta.
Hadda waa 24 sano Jir oo hadda ku jira waajibaadka xulkiisa koobka Euro 2020 waxaa uu u muuqdaa mid lagu abaalmarin doono heshiis waqti-dheer ah, wuxuuna rajeynayaa in la soo gabagabeeyo maalmaha soo socda.
Previous articleArgentina oo guul dahabi ah ka gaartay xulka Uruguay.
Next articleJuventus oo dalab ka gudbisay Qadka dhexe ee Sassoulo Manuel Locatelli.